Fantatrao ve fa efa nisy ny «marketing» mitazona »? | Martech Zone
Fantatrao ve fa efa eo an-dàlam-barotra "eo am-piandrasana"?
Ho marin-toetra aho. Rehefa Steve Hashman, Tale, Marketing & vokatra ao amin'ny Exponential Solutions ao amin'ny Ny CUBE, nanoratra tamiko tamin'ny sehatra infographic momba On Hold Marketing, Heveriko fa nihomehy mafy aho ary nimonomonona tamin'ny tenako, Mananihany ahy ve ianao?.
Saingy, toy ny mpivarotra tsara rehetra, dia nanao ny entimodiny i Steve ary nanangona infographic izay manazava tsara ny fotoana.
70% amin'ireo mpiantso an-tariby raharaham-barotra no mihazona.
60% amin'ireo hihantona rehefa tsy misy hafatra na mozika tavela.
30% amin'ireo mpiantso ireo aza miantso intsony!
Miaraka amina mozika sy hafatra tavela, handany ireo olona ireo 3 minitra lava kokoa miandry olona hamaly!
Indraindray ny mpivarotra dia mandany fotoana be amin'ny fahazoana, tsy miraharaha ilay hetsika mitranga aorian'ny fampifangaroana ny vinavina! Raha ny marina dia mandany ny 94% amin'ny teti-bolan'ny marketing ny orinasa hanentanana ny mpanjifa hiantso… fa ny 6% ihany no lany rehefa voaray ny antso.
Inona no ren'ny mpanjifanao rehefa mijanona izy ireo? Ity infographic ity dia tsy manome ny statistika fotsiny fa manome ny vahaolana hampiharana mahomby Marketing eo an-toerana tetika:
Tags: gobahafatra miandrymozika hajanonamitazona marketingmihantonafahanginana mihazonasteve hashmantelefaonany goba
Ny angon-drakitra dia manondro mpandresy mpandresy ara-barotra mahagaga